FORCES DE CHANGEMENT: « Mitaona ny vahoaka hanohitra ny fitondrana ». | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE FORCES DE CHANGEMENT: « Mitaona ny vahoaka hanohitra ny fitondrana ».
FORCES DE CHANGEMENT: « Mitaona ny vahoaka hanohitra ny fitondrana ».
By Nirinajuin 20, 2017, 18:32 0
Rehefa tsy mety miroso amin’ny fiaraha-mitantana ny fitondrana entin’ny Filoha Hery RAJAONARIMAMPIANINA, hijoro ho mpanohitra ny Forces de Changement. Nambaran’ity farany fa ny firosoana amin’ny fiaraha-mitantana mialoha ny fifidianana Filoham-pirenena 2018 no vahaolana ialana amin’ny fikatsahana ny tombontsoa ho an’olom-bitsy izay mampikoroso fahana ny firenena Malagasy.
Araka ny fanazavan’i Maharavo RATOLONJANAHARY (Doudou), mpitarika ny Forces de Changement, tsy hanaiky intsony ny fitondrana tarihin’ny Filoha ankehitriny sy ny antoko HVM ny hetsika. Hanohitra azy ireo amin’ ny endrika rehetra ny Forces de Changement. «Mety hiafara amin’ny fidinana an-dalam-be mihitsy izany».
Nilaza i Doudou fa eo am-panomanana ny fomba rehetra hanatanterahana izany ny hetsika ka miantso ny hery velona rehetra, ny vahoaka hiara-dia amin’izy ireo.
Previous PostMISSION S.O.S : Hanasitrana ny nofo, hitaiza ny fanahy. Next PostSARAH ZOE: Rindran-damina ho an’ny tanana ny fanatsarana ny fifamoivoizana sy ny tsena.